IZINTO EZISIXHENXE EKUFUNEKA UZENZILE XA UZIVA NGATHI UNIKEZELA - UKUHLALA UZIMISELE
Izinto ezisixhenxe ekufuneka uzenzile xa uziva ngathi unikezela
Nokuba uphumelele kangakanani kubomi nakwishishini, impumelelo ayikuniki mzimba kuluntu. Sonke sineentsuku apho singafuni ukuphuma ebhedini. Kodwa… kwenzeka ntoni xa olu luvo luhlala kangangeentsuku okanye iiveki okanye iinyanga? Kwenzeka ntoni xa siziva ngathi siphulukene nenjongo kwaye sifuna nje ukunikezela, nokuba kukwikhondo lomsebenzi okanye ubudlelwane?
Kule minyaka ili-12 idlulileyo, ngokwenza kunye nokuthengisa iinkampani ezininzi ukuza kuthi ga ngoku zisebenze nabanini bamashishini, ndiye ndachonga izinto ezisixhenxe ekufuneka uzenzile xa uziva unikezela.
1. Buyela ku 'Kutheni'
Njengoko uSimon Sinek esitsho, iqala ngo ‘ ngoba Ngamaxesha athile, siqala ngombono omnye engqondweni kwaye siphele sishukuma kude kude nesizathu sokuba siqale ishishini, umsebenzi okanye ubudlelwane kwasekuqaleni size siphele silahlekile kwaye sibuze izigqibo zethu kunye nezenzo.
Yintoni eyakho ‘kutheni?’ Fumanisa ngale simahla Ishidi lokusebenzela lokuKhuthaza ukukhuthazwa kwangoko . Yibambe mahala Apha .Intengiso
Mhlawumbi awunakukhumbula ixesha lokugqibela owonwabileyo. Mhlawumbi umfanekiso wakho omkhulu onemibala apho ubufuna ukuya khona uye wajika kancinci wabamnyama nabamhlophe. Buyisela oko kucaca! Rhoqo ngeentsuku ezingama-90, phinda utyelele 'omkhulu' wakho omkhulu ukuqinisekisa ukuba usendleleni kwaye ufezekisa into oyifunayo.
2. Funda ukuziva ungonwabanga
Ubomi abukho lula kwaye abufanelanga ukuba bube njalo. Sisoloko sijamelene nemiqobo kunye nemiqobo ekufuneka siyoyisile, eyinxalenye yoluhambo. Ukuba unokwamkela ukuba izinto ziya kuba nzima kwaye ngekhe zihlale ziiroses kunye neekati ezinuka kamnandi, uya kuzifumana ukulungele ngakumbi okuzayo.
Xa uziva uxinekile, kufuneka ufunde ukuphefumla, uphinde usete kwaye uphinde utyelele iinjongo zakho. Yintoni le uyenzayo kushishino nakubomi? Uhlengahlengiso olulula kunye 'nexesha lokuphuma' elifutshane linokukuqhubela phambili ngokumangalisayo ngokungakhange ucinge ukuba kunokwenzeka.
3. Phumelela ngokuzingisa
UWinston Churchill uthe,Intengiso
ukuba wenzeni xa uwuthiyile umsebenzi wakho
Ukuba unendawo ebalulekileyo oza kuyenza, ungazami ukuba nobuqili okanye ubukrelekrele. Sebenzisa umqhubi weemfumba. Betha inqaku kube kanye. Emva koko buya uphinde uyibethe kwakhona. Emva koko yibethe okwesithathu- into emnandi kakhulu.
Ukuzingisa ngundoqo ukuba ufuna ukuphumelela. Ndizive ndinikezela amaxesha amaninzi ngexesha lohambo lwam lokurhweba kwaye ukuzingisa kokwenza izinto kwenzeke kundigcinile. Ukuqonda kunye nokukholelwa ngokwenyani ukuba ukuzingisa kuzisa iziphumo kuya kukugcina uqhubela phambili.
Zama ezi Iindlela ezi-6 eziSebenzayo zokuzingisa .
4. Yabelana ngeenjongo zakho
Uvuka kwaye uthathe isigqibo sokuba namhlanje lusuku lokuba uyeke ukutshaya. Uqala intsasa eyomeleleyo, kodwa ungafuni ukuyikhankanya nakubani na emsebenzini xa kunokwenzeka uvakalelwe njengeyinye kwitiye yasemva kwemini…Intengiso
Fumana 'umhlobo onoxanduva lokuphendula' ukuze ugcine umkhondo. Ngokuqinisekileyo, oku kuyothusa, kodwa kuyaqinisekisa ukuba ufezekisa isithembiso sakho kuwe. Qinisekisa ukuba omnye umntu uya kukubonisa uthando olunzima. Oku kuyakukugcina unyanisekile kwaye uqhubeke ngokuthatha amanyathelo.
5. Yamkele imingeni
Ewe ewe, kuyakubakho amaxesha anzima- kodwa sele uyayazi le nto. Xa uziva unikezela ngenxa yokuba kunzima kakhulu, ayothusi njengoko ubusazi ukuba uhambo aluzukugcwala yimvula kunye nemivundla.
Joyina i-Lifehack yasimahla Iklasi ekhawulezayo yokuKhangela-Sebenzisa iNkuthazo yakho kwaye ufunde indlela yokuvuma umceli mngeni, wamkele, funda ngento onako ukuyenza kunye namandla xa amaxesha esiba nzima! Joyina iseshoni yasimahla apha.
Sonke singena kwi-funk rhoqo. Yile ndlela kanye esakhiwe ngayo. Kodwa, endaweni yokulala esofeni utya ice cream ngaphandle kwebhafu kwaye ubeke i-sitcom oyithandayo, yonwabile!Intengiso
Cinga emva kwexesha lokugqibela owawusebenza ngenene ebomini bakho. Cinga ngale nto ubuyenza kwaye uyenze yenzeke kwakhona! Kum, ngumculo. Ndiza kunyusa ivolumu, whack kwi-iPod kwaye ndidlale endiyithandayo umkhondo wamandla aphezulu ukundidibanisa.
7. Yiba neqhayiya
Ngamanye amaxesha, siyalibala ukuma nokujoja iintyatyambo. Ngokuhambelana nale migca, silibale nokubhiyozela uloyiso esilwenzileyo.
Yiba neqhayiya apho uvela khona kwaye uphumelele ntoni. Rhoqo kwiintsuku ezingama-90, jonga kwakhona iinyanga ezintathu ezidlulileyo, kwaye unciphise impumelelo yakho nokuba incinci kangakanani. Funda Uyibhiyozela njani iMpumelelo eNcinci ukuze ufezekise iinjongo ezinkulu .
Ngexesha elizayo xa uziva unikezela, zibuze ukuba wenze konke okusemandleni akho kwimeko yakho yangoku ukuze wandise ithuba.Intengiso
Izinto ezimnandi ezenziwa zizibini ezitshatileyo
Ngaba ukhe wanamava okufunda, ukonwaba kunye neentlungu ezinxulumene nento ofuna ukuyiphumeza? Ukuba impendulo nguhayi, qhubeka ude ube unayo!
Iingcebiso ezingakumbi zokukhuthaza
Ukuncama Ayisiyondlela onokukhetha kuyo! Unganikezeli njani kwaye uhlale ukhuthazeka
Unganyamezela njani (kwaye uye phambili!) Xa Ukufumana kuya kusiba nzima
25 Ungaze unike iikowuti malunga nokunyamezela
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: UBonnie Kittle nge unsplash.com
Uluhlobo luni lomfundi olibuza imibuzo
Ixabiso lakho alinciphi
ungazisebenzisa njani iibhendi zokumelana nemilenze
funda ukulawula iimvakalelo zakho
Ukucinga Ngaphambi Kokuba Usebenze Imvelisogadget Impumelelo Kwikhondo Lomsebenzi Inkuthazo Usapho